Indlela yokubala i-Mass Percent Composition
Imizekelo yeengxaki zepesenti zee-Mass Perfect Chemistry
Lo ngumzekelo umzekelo obonakalisiweyo obonisa indlela yokubala ubume bepesenti. Ukwakhiwa kwamaphesenti kubonisa inani elilinganayo lento nganye kwisakhi. Kwinqanaba ngalinye:
% ubuninzi = (ubuninzi bezinto kwi-mole mole 1). (ubunzima be-molelar ye-compound) x 100%
ipesenti yepesenti = (ubuninzi be-solute / mass mass solution) x 100%
Iinqununu zobuninzi ziqhelekile. Ipesenti zeMisa ziyaziwa njengeepesenti ngesisindo okanye w / w%.
Ubuninzi be-molar bubungakanani bemimandla yazo zonke i-athomu kumlenze omnye weklasi. Isistim zonke ipesenteji ezininzi kufuneka zongeze kwi-100%. Jonga iimpazamo zokujikeleza kwisigqibo sokugqibela ukuqinisekisa ukuba zonke iipesenti zongeza.
I-bicarbonate ye-soda (i- sodium hydrogen carbonate ) isetyenziselwa ezininzi zokulungiselela amashishini. I-formula yayo yiNaHCO 3 . Fumana iipesenti zepesenti (ubunzima%) be-Na, H, C, no-O kwi-sodium hydrogen carbonate.
Okokuqala, jonga phezulu iindimo zee-atomki zezinto ezivela kwiTable Periodic . Izibalo ze-athomu zifumaneka ukuba zi:
Emva koko, misela ukuba ziphi igramu zequmrhu ngalinye zikhoyo kwi-molecule eyodwa yeNaHCO 3 :
22.99 g (1 i-mol) yeNa
1.01 g (1 i-mol) yeH
12.01 g (1 i-mol) yeC
48.00 g ( 3 i-mole mole x 16.00 igrama nganye )
Ubunzima bomsele omnye weNaHCO 3 ngu:
Kwaye ipesenteji eziziininzi zezinto zikhona
ubunzima% Na = 22.99 g / 84.01 gx 100 = 27.36%
ubunzima% H = 1.01 g / 84.01 gx 100 = 1.20%
ubunzima% C = 12.01 g / 84.01 gx 100 = 14.30%
ubunzima% O = 48.00 g / 84.01 gx 100 = 57.14%
ubunzima% Na = 27.36%
ubunzima% H = 1.20%
ubunzima% C = 14.30%
ubunzima% O = 57.14%
Xa ukwenza ukubala kwepesenteji eziphezulu , kuhlale kuluvo olufanelekileyo ukujonga ukuze uqiniseke ukuba i- percents yakho yongeza i-100% (inceda ukubamba iimpazamo zamatriki):
Ipesenti Ukubunjwa kwamanzi
Omnye umzekelo olula ufumanisa ukubunjwa kwepesenteji zamanzi kumanzi, H 2 O.
Okokuqala, fumana ubuninzi beemitha zamanzi ngokudibanisa i-atomic mass of the elements. Sebenzisa amaxabiso ukusuka kwitheyibhile yenkcazelo:
H i-1.01 grams nganye
O ngu-16.00 amagremu nganye
Fumana ubunzima be-molar ngokufaka zonke izihlwele zezinto ezikwinqanaba. I-subscription emva kwe-hydrogen (H) ibonisa ukuba kukho i-athomu ezimbini ze-hydrogen. Akukho mveliso emva kwe-oksijini (O), oku kuthetha ukuba i-atom enye ikhona.
ubunzima be-molar = (2 x 1.01) + 16.00
ubunzima be-molar = 18.02
Ngoku, hlukanisa ubunzima beqela ngalinye ngumbumba opheleleyo ukufumana ipesenti ezikhulu:
ubunzima% H = (2 x 1.01) / 18.02 x 100%
ubunzima% H = 11.19%
ubunzima% O = 16.00 / 18.02
ubunzima% O = 88.81%
Ipesenteji ezininzi ze-hydrogen kunye ne-oksijini zongeza kwi-100%.
I-Mass Percent yeCarbon Dioxide
Ziziphi iipesenti zeeparbon ne-oxygen kwi-carbon dioxide , i-CO 2 ?
Inyathelo 1: Fumana ubuninzi bee-athomu ngamnye .
Khangela phezulu i-atomic mass for carbon and oxygen ukusuka kwiTable Table. Ingcamango enhle kweli nqanaba ukuhlala kwiqela lamanani abalulekileyo oza kusebenzisa. Izibalo ze-athomu zifumaneka ukuba zi:
C ngu 12.01 g / mol
O 16.00 g / mol
Inyathelo 2: Fumana inani legrama ngalinye kwicandelo lenza i-mole enye ye-CO 2.
Elinye i-mole 2 ye-CO 2 iqule i-mole engama-athomu ye-khabhoni kunye nama-2 e-moles e-athomu ye-oksijini .
32.00 g (2 i-mole mole x 16.00 igrama nganye)
Ubunzima bomlenze omnye we CO 2 ngu:
Inyathelo lesi-3: Fumana ipesenti yee-atom nganye.
ubunzima% = (ubuninzi becandelo / ubuninzi bebonke) x 100
ubunzima% C = (ubuninzi be-1 ye-carbon / ubuninzi be-1 ye-CO 2 ) x 100
ubunzima% C = (12.01 g / 44.01 g) x 100
ubunzima% C = 27.29%
ubunzima% O = (ubuninzi be-1 ye-oksijini / ubuninzi be-1 ye-CO 2 ) x 100
ubunzima% O = (32.00 g / 44.01 g) x 100
ubunzima% O = 72.71%
Kwakhona, qinisekisa ukuba i-percents yakho yesininzi yongeza kwi-100%. Oku kuya kunceda ukubamba naziphi na iimpazamo zamatriki.
Iimpendulo zongeza kwi-100% yinto ekulindelwe.
Iingcebiso Zokuphumelela Ukubala Amaphesenti Ama-Mass
Ngeke uhlale unikwa ubungakanani bomyinge womxube okanye isisombululo. Ngokuqhelekileyo, kuya kufuneka udibanise abantu. Oku kusenokungabonakali! Unokuba unikwe amaqhezu e-mole okanye i-moles uze ufune ukuguqula kwiyunithi yobunzima.
Jonga amanani akho abalulekileyo!
Njalo qinisekisa ukuba isibalo samaphesenti amaninzi kuwo onke amacandelo angongeza kwi-100%. Ukuba ayenjalo, ngoko kufuneka ubuyele kwaye ufumane iphutha lakho.
Iimviwo zoLondolozo zeLabhile ebalulekileyo
Igalari yokuLawulwa kweMithi engapheliyo
Amahlaya amaDorsaest Dinosaur yehlabathi